Ikhaya / Amanzi okugeza / Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa / Oompompi Abazenzekelayo Commercial Chrome Hot Futhi Cold Water
Isikhiphi sendwangu sisebenzisa ugesi we-AC noma amandla kagesi we-DC, futhi sisebenzisa ukwenziwa kwe-infrared.
Endaweni enomuzwa, lapho ufinyelela endaweni enomuzwa, lapho usuka endaweni enomuzwa, ungama futhi umise amanzi. Amanzi ashintshwa ngokuzenzakalela yizinzwa ngaphandle kokuthinta isikulufu, okungakugwema ngempumelelo ukutheleleka kwamagciwane. Asikho isidingo sokushintsha ibanga ngesandla, futhi kukhona ukugeza isikhathi esengeziwe ngomzuzu kanye nomsebenzi wokumisa amanzi.
Ukugwema ukungcola kwemithombo yamanzi okubangelwa izinto zakwamanye amazwe kuhlu lokuzwa isikhathi eside, ibhethri lamandla we-alkaline lisetshenziselwa ukuhambisa amandla kagesi we-DC, futhi isihlungi sakhiwe ngaphakathi ukuvikela ukungcola ekungeneni i-valve ye-electromagnetic.